Askari Kenyaan ah oo lagu dilay Ceelwaaq iyo Weerar ka dhacay Baardheere.
Weeraro lagu qaaday sedax katirsan saldhigyada ciidamada Kenya ee Jubbada hoose.
Al Shabaab oo sheegay in ay dileen guddoomiye deegaan oo katirsanaa dowladda Kenya.
Weerar lagu qafaashay mas'uul Kenyaan ah oo ka dhacay deegaan katirsan gobolka Wajeer.
Dowladda Farmaajo oo sheegtay in ay cilaaqaadka Diblumaasiyadeed ujartay Kenya.